चितवनको विकासमा प्रधानमन्त्रीको चासो – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
चितवनको विकासमा प्रधानमन्त्रीको चासो
२०७१ बैशाख २१, आईतवार ०२:२१ गते
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चितवनको विकासमा चासो देखाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेट्न काठमाडौँ आएका चितवनका प्रतिनिधि मण्डलसँग उहाँले चितवनको क्षेत्र नं. ४ लाई केन्द्रमा राखेर समग्र चितवनको विकासका लागि योजना अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
‘मैले चितवनका विभिन्न योजनाहरु विकासका लागि प्रस्ताव गरेको छु’, प्रधानमन्त्री कोइरालाले भन्नुभयो,‘चितवनको विकासको जिम्मा मलाई छोड्नूस ।’ पश्चिम चितवनको पटिहानीसम्मको सडक सुधारका लागि बजेट विनियोजित गरिएको, भरतपुरबाट चनौली सडकका लागि सुधार योजना अघि बढेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गुञ्जनगरको गाजीपुरमा नारायणी नदी तटबन्ध, चितवन क्षेत्र नम्मर ४ मा २५ शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि पनि सम्वन्धित निकायलाई योजना बनाइ कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिइएको पनि बताउनुभयो ।
‘चितवनको विकास गर्ने भनेर मैले चितवनबाट चुनाव जिते । अहिले यो क्षेत्र छाडे पनि मेरो दायित्व उत्तिकै हो’, प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने । गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा कोइरालाले चितवन क्षेत्र नं. ४ बाट जितेपनि पछि यो क्षेत्र छोडेका हुन् । अहिले यो क्षेत्रमा उपचुनावको तयारी भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति टेकप्रसाद गुरूङको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर विकास निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए ।
यसैबीच वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री कोइराला चितवन आउँदै हुनुहुन्छ । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनको सौराहामा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन कोइराला चितवन आउन लाग्नु भएको हो । कोइरालाले सोही दिन रत्ननगरको सौराहाचोकमा अवस्थित हंश मनोरञ्जन केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाको सहभागिता हुँदै छ ।
जननायक वीपी कोइराला मेमोरियल ट्रष्ट र प्रजातान्त्रिक विचार समाज चितवनले प्रजातान्त्रिक समाजवाद र समावेशी लोकतन्त्रका विषयमा विचार गोष्ठीको आयोजना गरेको छ ।